Ciidamada Xasilitna oo Muqdisho ku qabtay rag hubeesan oo dhibaato ku hayay dadka Shacabka ah * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 On Jul 4, 2017
Ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay kusoo qabteen gaari nuuciisu yahay Noah ay la socdeen rag hubeesan oo lagu eedeeyay in ay inta badan shacabka magaalada u geesan jireen dhac xoogan.
Burcadan ay qabteen ciidamada xasilinta oo gaarayay afar nin ayaa watay biskoolado ay dadka ku baaran jireen, waxaana ragan burcada ah la sheegay in gaariga iyaga oo wata ay magaalada ku dhax baaran jireen dadka ay arkana iyaga oo wata Cumputero ,Moobeelo qaali ah iyo lacago intaba.
Sargaal katirsan laamaha amaanka dowlada Soomaaliya ayaa sheegay in ragan burcada ah ee la qabtay ay inta badan dhaca ka geesan jireen Suuqa Bakaaraha iyo agagaarkiiaa , waxa ay sidoo kale burcadan dhac ka gesan jireen Degmooyinka Howl-Wadaag iyo Wardhiigley iyo Degmooyin kale.
Shacabka magaalada Muqdisho ayaa qaati ka taagnaa burcad hubeesan oo inta badan iska soo dhiga ciidamo katirsan dowlada, kuwaa oo dhac u geesta shacabka xiliyada habeenkii iyo waliba maalinta cad, waxaana marar badan burcadan ay dhac u geesteen dad masaakiin ah ay ku jiraan arday